जयराम पुलको ढलान सकियो, मंसिरदेखि सञ्चालन हुने - Dainik Nepal
मंगलबार, १ साउन २०७५
दैनिक नेपाल २०७४ असोज २५ गते ७:१८
खोटाङ, २५ असोज । खोटाङ जिल्लाको प्रमुख नाका जयरामघाटस्थित दूधकोशी नदीमा निर्माणाधीन मोटरेबल पक्की पुलको ढलान कार्य सम्पन्न भएको छ ।
जयरामघाटको पुल सञ्चालनमा आएपछि जिल्लामा समृद्धिको बाटो खुला हुने सांसद पाँचकर्ण राई ९पिके० ले बताउनुभयो । “पुल अभावमा लामो समयदेखि जिल्लाको हरेक विकास÷निर्माणमा बाधा पुगेको थियो ।” उहाँले भन्नुभयो, “पुल सञ्चालनमा आएपछि त्यो सबै समस्या समाधान भएर जिल्ला समृद्धिको बाटोतर्फ अगाडि बढ्छ ।”
अस्पतालको उपकरण लिलामका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत चासो दिएको थियो । उपकरण लिलाम प्रकरणबारे छानबिन गर्न मन्त्रालयको टोली खोटाङ आएर गएपनि अहिलेसम्म कुनै कारबाही भएको छैन । – रासस
सप्तरीमा एनएमबि बैंकको ११०औं शाखा सञ्चालन
कर्मचारी र श्रमिकको पारिश्रमिक बैंक खातामार्फत
अनुदानको प्रलोभन देखाएर डेढ महिनामा लाखौं रुपैयाँ ठगीए किसान
डा. गोविन्द केसीको पक्षमा देउवाले निकाले यस्तो वक्तव्य
पार्टीका जन सभामा गाडी चाहिने, अहिले ढाड सेकाउने ?
‘म अन्तिम नाम परिवर्तन गरिरहेकी छुु’
फिरन्ते ‘बर्षे सेलिब्रिटी’
नीलकण्ठ उप्रेती भारत र उदयराज पाण्डे मलेसियाका लागि राजदूत सिफारिस
यसरी कारबाहीमा परे प्रचण्डका घरबेटी
जब गुडिरहेको स्कोर्पियो गाडीमा निर्वस्त्र महिला भेटिइन्…
सकियो पौडेल गुटको भेला, किन गएनन् सिटौला ?
एक हप्तादेखि बेपत्ता भएकी युवतीको हत्या
काँग्रेसले फेरि सदन अवरुद्ध गर्‍यो, संसद बैठक आधा घण्टासम्मका लागि स्थगित
बजेट अभावमा पहिरो हटाउन समस्या
अध्यक्ष गुरुङले थाम्न सकेनन् रिस, निवर्तमान अध्यक्षलाई दिए नानाथरी धम्की
शुरु भयो नेकपाको सचिवालय बैठक, कांग्रेसको भूमिकाका बारेमा छलफल हुने
नेपाल-भारत सीमावर्ती अधिकारीको बैठक
जाजरकोटमा चौध सयभन्दा बढी बालबालिका जोखिममा